बिम्स्टेक चौथो शिखर सम्मेलनको जोड संयुक्त लगानी र विकासमा ! « News24 : Premium News Channel
बिम्स्टेक चौथो शिखर सम्मेलनको जोड संयुक्त लगानी र विकासमा !
काठमाडौं, १५ काठमाडौं । उर्जा सहकार्य, व्यापार, लगानी लगायतका विषयमा संयुक्त रुपमा काम गर्ने प्रतिवद्धता सहित विमस्टेक चौथो सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । कनेक्टिभिटीका हिसाबले हिमालदेखि समुद्रसम्म जोड्ने अभियान सहित बिमस्टेकलाई विकास गर्नुपर्नेमा सातै राष्ट्रले एक्यबद्धता जनाएका छन् ।
भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा सम्पन्न बिमस्टेक चौथो शिखर सम्मेलनको व्यापार, लगानी र उर्जामा सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता सहित १८ बुँदे काठमार्डौ घोषणापत्र जारी गर्दै बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलन सकिएको छ । सममेलनमा विद्युत् लाइन प्रसारणको अन्तरदेशीय मार्ग ‘बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन’ को समझदारीपत्रमा सरकार प्रमुखको उपस्थितिमा विदेश मन्त्रीहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । उर्जा, व्यपार, र लगानीकमा संयुक्त रुपमा काम गर्ने प्रतिवद्धता विमस्टेक सम्मेलनमा सबै मुलुकले गरेका छन् ।
बिमस्टेक राष्ट्रहरुबीच ऊर्जा आदानप्रदान सम्बन्धी सम्झौता भएपछि नेपालले सबै मुलुक संग विद्युत सम्झौता गर्न सक्ने भएको छ । हरेक मुलुकले सहजै विद्युत खरिद र विक्री गर्न सक्ने छन् । सम्मेलनको अन्तिम सत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रिपाल सिरिसेनालाई बिमस्टेकको अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्नु भयो।
बिमस्टेकमा भएका सहमतिहरु पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र प्रयोगमा ल्याउन भने चुनौती देखिन्छ । त्यसैले बिमस्टेकलाई चलायमान, प्रभावकारी र परिणाममुखि क्षेत्रीय संगठन निर्माण गर्न सबैले जोड दिने प्रतिवद्धता जनाए ।